Jumlada BT-303 Polycarboxylate Superplasticizer 40% (nooc gaabis ah oo sii daaya oo yaraada) warshad iyo soosaarayaal | Gaoqiang
BT-303 waa jiil cusub oo tartiib tartiib tartiib tartiib ah u sii deynaya isla markaana cabaya khamriga hooyada ee laga sameeyay TPEG by polymerization xagjir ah oo bilaash ah, iyo koox cusub oo sii-deyn-sii-deyn ah ayaa lagu soo kordhiyay habka. Marka loo eego xaalada aalkalin ee la taaban karo, kooxda tartiib tartiib-u-sii deynta ee qaab-dhismeedka kiciye ee sheygan ayaa si tartiib tartiib ah u sii deyn kara kooxda oo leh shaqo firidhsan, oo ciyaareysa doorka sii wadida inay kala firdhiso sibidhka, si loo gaadho doorka ka-hortagga luminta la taaban karo Waxay leedahay heer dhimis biyo oo hooseeya, laakiin waxay leedahay waxqabad ilaalin ah oo aad u sarreeya. Waxaa badanaa loo isticmaalaa shubka xoogga sare leh shuruudaha sare ee waxqabadka ilaalinta hoos u dhaca, iyo alaabteeda ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa bamgareynta shubanka, is-is-dul-qaadid isdaba-joog ah iyo xoog-kar sare oo tayo sare leh iyo shubka ganacsiga ee tareenka xawaaraha sare leh, wadada weyn, tamarta-korontada iyo mashaariic kale oo waaweyn oo injineernimo ah.
1.With wax qabad aad u sarreeya, wuxuu u oggolaan karaa 2h hoos u dhac la taaban karo oo aan khasaaro lahayn
Qiyaasta yareynta biyaha guud ahaan looma isticmaalo kaligeed, waxay u baahan tahay in lagu daro nooca yareynta biyaha cabitaanka khamriga.
3.Wax leh nafwaayay hoose iyo tayxotropy, waxay aad ugu habboontahay la taaban karo oo leh saamiga sibidhka biyaha oo hooseeya
Waqtiga sii deynta waa ka gaabiyaa kan BT-302, guud ahaan 1 saac ka dib (oo isbeddelka sheyga la taaban karo, waxaa jiri doona isbeddello qaarkood).
Tusmada adag 40±1
Dheecaanka sibidhka MM 270mm saacaddii
3. Khuseeya dhammaan noocyada kala duwan ee warshadaha iyo dhismaha madaniga ah iyo saldhigyada isku dhafka shubka ganacsiga.
Wax soo saarkani waa dareere aan midab lahayn ama huruud khafiif ah lahayn. Qiyaasta:Badanaa ,isticmaal 0-30% cabitaanka hooyada iyadoo la yareynayo cabitaanka hooyada biyaha, iskuna qas waxyaabo kale oo yar yar si aad u sameyso wakiilka yareeya biyaha. Qiyaasta wakiilka biyaha yareeya guud ahaan waa 1% ~ 3% wadarta miisaanka guud ee qalabka sibidhka.
2. Kahor isticmaalka badeecadan ama bedelida nooca iyo dufcaddii sibidhka iyo quruurux, waxa lagama maarmaan ah in lagu sameeyo tijaabada la qabsiga ee sibidhka iyo quruuruxa. Sida ku cad tijaabada, deji saamiga wakiilka yareeya biyaha
Hore: BT-302 Polycarboxylate superplasticizer 40% (Nooca haynta sicirka sare)
Xiga: Polycarboxylate Superplasticizer budada
Polycarboxylate-ku saleysan Superplasticizer
Nooca Jaangooyada Polycarboxylate Superplasticizer